January 23, 2021 - Babal Khabar
Jan232021 by बबाल खबरNo Comments
उनको प्रेमको न'शा लागेर म कसरी ढले भन्ने कुरा आज आएर सम्झिदा पनि उत्तिक्कै आनन्द लाग्छ । उनि छैनन् बस छ त केवल उनको स्प'र्श, उनको सुगन्ध, उनको कल्पना, उनको याद र उनको सपना मात्र । त्यो एक रात अनि एउ'टाको साथ, पुरै जिन्दगी पलभरमै जिएको जस्तो मेरो आभास, सायद उनको पनि ।” फेसबुकले सुरु गराएको हाम्रो परिचय बिस्तारै सा'मिप्य तातर्फ लम्किदा लम्किदै उनि मेरो' र म उनको भइसकिएको थियो । उनका तस्विर र स्टाटसहरु निक्कै भलादमी, अनि कुरा गर्ने तरिका पनि । माघ महिना, तराईको चिसो, एउटा सानो झुप्रो घर ! उनले आज के लेखे ? कस्तो तस्विर अपडेट गरे ? अनि मलाई के म्यासेज लेखे ? बस यहि खुल्दुलीमा २ दिन बितेका थिए । हिउदको बेला तराईमा खासै बर्सात हुदैन, तर त्यो समयमा भने लगातार ३ दिनसम्म पानी पर्यो, बिजुलीका पो'लहरु ढ'ले, टेलिफोन सेवा अव'रुद्ध भयो ।” कहाँ के – कति क्ष'ति भयो जानकारी लिन रेडिय
मलेसियाबाट १८ जना नेपालीको श'व शनिबार नेपाल ल्याइएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजमार्फत १८ जना नेपालीको 'नेपाल ल्याइएको हो। एनआरएन मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले श'व ल्याउनको लागि पहल गरेका थिए। गएराति मलेसिया गएको जहाजले शनिबार बिहान श'व ल्याएको नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा काम गर्न गएका नेपाली विभिन्न कारणले ज्या'न गुमा'एर त्यहाँ अलपत्र अवस्थामा थिए। श'व ल्याउन नसकिएका १ जनाको भने अ'स्तु मात्रै ल्याइएको छ। श'व बुझ्न गएका आफन्तको रु'वाबा'सीले बिहान विमानस्थलको वातावरण भा'वु'क बनेको थियो। मृ'तकका परिवारको पी'डालाई बुझेर निगमले नाफा भन्दा पनि सामाजिक उत्त रदायित्व बहन गर्ने क्रममा श'व ल्याएको निगमका प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले बताइन्। निगमले क्वालालम्पुर गन्तव्यमा न्यारोबडी जहाजले नियमित उडान गर्दै आए पनि नेपाली कामदारको श'व लिनक
राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सं'सद वि'घटन गर्ने कदम सं'विधान विप'रीत भएको दाबी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीले घो'षणा गरे पनि कुनै पनि हालतमा चुना'व नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने,‘चुनाव एक हुँदैन, दुई हुँदैन, तीन हुँदैन, हुँदै हुँदैन। केका लागि जनादेश चाहियो ? पाँच वर्षका लागि तपाईंलाई चुनेको होइन जनताले ? उहाँले अहिलेको व्यवस्था सिध्याउन यो गर्नु भएको हो। यो अपराध हो। सन्कीको भरमा गरेको काम बदर गर्नुपर्छ।’ उनले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान वि'रू'द्धको काम भएको टिप्पणी गरे। प्रधान'मन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने संविधानमा कुनै विशेषा धिकार नभएको उनले दाबी गरे। उनले संविधान बनाउँदा मस्यौदा समितिमा आफू पनि सदस्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला सुवास नेम्वाङले संसद वि'घ'टन गर्न पाउने विशेषाधिका